Life College: Chii chinonzi Commuter Student?
Zvidzidzo Zvipi Zvinopa Vadzidzi Vanoenda Kumuchechi
Haasi munhu wose anorarama pamusasa pavanenge vachienda kuchikoro. Vadzidzi vanoenda kumusha vanogara pamba uye vanoenda kumakirasi avo kune imwe yejijijiji kana yunivhesiti yemakore mana.
Ndiani anodzidzira mudzidzi?
Izwi rokuti 'mutengesi mudzidzi' rinoshandiswa kurega kureva kwete dorm chete, asi kure.
Iwe haugoni kudana sophomore uyo anogara mune imwe nzvimbo yepamusasa-mudzidzi 'mudzidzi wekambani.'
Mumwe mudzidzi wekoroji uyo anogara mumusha wehucheche hwake uye anotora hafu yenguva kuenda kuchikoro angave mudzidzi wekutengesa.
Vashandi vekutengesa vanobatanidzawo 30-chimwe chinhu nemhuri yega, unoenda kuchikoro achishanda.
College Life paChikoro Chikoro
Makoroji ane vanhu vakawanda vanoenda kune dzimwe nyika vanofananidza zvipo zvavo zvakakodzera. Vatungamiri vanonzwisisa kuti vazhinji vevadzidzi vavo vanotyaira kana kuenda kuchikoro uye havangagari kwenguva yakareba kana makirasi ekuguma kwezuva.
Zvikoro zvekufambisa zvinowanzopa zvinhu zvakadai se:
Makore ekupaka uye mitemo yekupa mapepa ekupa mahara kune vamwe vanodhairi vechikoro vanouya uye vanofamba zuva rose.
Mutori wevadzidzi angave ane makateji. Izvi zvinobvumira vadzidzi vekutengesa nzvimbo kuchengetedza mabhuku nezvimwe zvidikanwi pamusasa kuitira kuti varege kuita kuti vaitakure nguva dzose. Izvi zvinobatsira zvikuru kuvadzidzi vachivimba nekutakura kwevanhu uye avo vanoshandisa zvidigiri zveumhizha zvinoda zvishandiso kana zvimwe zvigadzirwa.
Chido chekuvakwa kwemusasa hachisi chikuru zvokuti zvikoro izvi zvinowanzova nemabhedha mashomanana. Vakawanda havasi kupa pa-campus housing zvachose.
Zvokudya zvekudya zvinowanzoshumira masikati uye zvichida zvokudya zvokudya zvishoma. Havazogoni kupa chikafu kana kudya chero kupi zvako kwevhiki.
Kana zuva ravira, musasa wacho unopera. Izvozvowo ndezvekupera kwevhiki uye mabasa emusasa anowanzogadzirirwa panguva yeMuvhuro kusvika kuChishanu vhiki.
Mukana Wekuve Mudzidzi Wekutengesa
Kune vazhinji vadzidzi vekukoloni vanofadzwa nehupenyu hwekoroji hwemahombekombe, asi haisi yevanhu vose.
Upenyu hwomudzidzi wekutengesa hune zvigaro zvahwo.
Kurarama pamba kunogona kuchengetedza mari yakawanda. Kunyange kunze-kambani dzimba dzinogona kudhura kupfuura mukamuri nebhodhi.
Kurarama panze dorm kunogona kuoma uye kana uchida waunogara naye, unogona kuzvisarudzira iwe pachako!
Flexible class schedules uye mamwe manheru madhikoni anowanzowanikwa. Vakawanda vanoenda kumisasa vanonzwisisa kuti vamwe vevadzidzi vavo vanoshanda basa renguva yakazara vachienda kuchikoro uye vanoedza kugara.
Kudzidzira mari kunogona kuderera. Zvidzidzo zvisingasimiri mune dorms nezvimwe zvipo zvevadzidzi veku-campus zvinowanzopa kupa zvidzidzo pamitengo yakaderera pane zvikoro zvekare.
Zvechokwadi, kune zvishoma zvishoma zvekudzidzira kuva mudzidzi wekutengesa, kunyanya kunzwa kwokunatswa kubva kuchikoro nevamwe vadzidzi. Dzimwe nguva zvinogona kunzwa se "bhizinesi-chete" mumhepo kunyange kune nzira dzekugara dzakabatana.
Kugara paKomisheni Yekutengesa
Vadzidzi ivavo vanoita zvekutengesa avo vanoda kurarama kune vafambisi vechikwata vachada kuziva nezvekugara kwekushanda kwemazuva ekupedzisira.
Kana chikoro chinopa doro pamusasa, nzvimbo inowanzosanyanya. Kusiyana nedzimwe makoroji, freshmen haatongorori dzimba uye hazvifungidziri kuti munhu wose anobva patsva achagara pamusasa.
Nyatsocherechedza nguva yekugara yeimba uye uise shanduro yako zvakanaka. Dzimwe dzikoro dzichashanda pakutanga-kuuya, nheyo yekutanga. Zvinowanzova nani kupa mvumo yekukurumidza pakarepo iwe paunogamuchira tsamba yekugamuchirwa.
Zvakakoshawo kushandisa kare kumapuranga ari kunze-kambasi asi kupa vadzidzi vekuchikoro. Kana zvakakosha zviri mukati mekufamba-famba kwemusasa, zvichazadza zvakare. Tora chikumbiro chako pakarepo kana iwe ungave uchienda mberi kupfuura iwe unofunga!
ACC, The Atlantic Coast Conference
College Profiles A kusvika Z
Pac 12 Musangano
Makoroji anogamuchira Common Application
A Photo Tour yeOhio State University
Ndeipi uye Ndeipi Iko US First Open Open Tournament Yakakidzwa?
Zvigadzirwa zveMotokari Zviripo
Zheng Shi, Pirate Lady weChina
Nhoroondo Yekare Yokufamba
Tarot Cards uye Zvavanoreva
Kuwedzera ça kuchinja
Zvikonzero Zvokusarudza Bhizimisi Major
Kudzidzisa Kuvaka Muviri - Pre-Contest Carbohydrates Depletion Training
Ecuadorian Legend: Nhoroondo yeCantuña
5 Makambani Makuru Akatarisira Kusarura Rusarura
Chii Chinonzi Slackpacking?
Ndeapi maZebateboarding Aripo?
Nzira Yekuita Mabhupi Izvo Zvisingaiti
Maple Syrup Printable
Kutanga Kutanga Kudzidza Japane
Zvazvinoreva Kana Mwedzi Wako Uri muCoropo
Nanika atta - Simple Japanese Phrases
Museum of Science uye Indasitiri muChicago
Chii Chisiyana Pakati Pakati PPP uye Absolute PPP?
Nzira Yokutamba 2-Card Poker
Chii Chinonzi Kusiyana Pakati Pekuparadzanisa uye Kushungurudzika?
Nzira Yokumutsa Sei Muse Yako
Air-Purifying House Imiti yeMusha
A History and Style Guide yeKarate neMarudzi Ayo
Nhaurirano: Kubvunzurudzwa neActor Actor